March | 2011 | Aung Ko Htwe Personal Website
********************************* Myanmar Earth quake ….7 24/3/2011 Tar lay Lwal mway Tar chi late … လွယ်မွေ မှာ ဗဟိုပြု တာလေ မှာ အပျက်အစီးများ ကျိုင်းတုံ ထက် တာချီလိတ် နည်းနည်းပါးပါးစိုး နှစ်မြို့ကြား…လမ်းအကွဲကြောင်းများပေါ် …..
******************************* Album Kara -3 -ring .. -doubt …
****************************************** We love sports . ****************************************** This update is not same with stamps .****** Stamps is 2009 same time . This is 2010 to 2011 update . 1. Myanmar actress Phway Phway … 2.Taylor swift …friendship .. 3.Yu na kim … Continue reading →
********************************************* New Movie 2007 ..first half …
******************************************* 2009 new year program ….stamps … U Thant / UN general secratary 1961 U = Mr. / Oull = Mister He isafamous man . He is good abality in politcal field . I amaordanary person … Continue reading →
********************************************* Sometime, England need super subs . Super subs needs to try . France needs new generation and stable .
MYANMAR FOOTBALL -ပထမပိုင်း ကစားပုံကောင်းပါတယ်…. -ဒုတိယပိုင်း…ကစားပုံကျသွားတယ်… -လူစား မလဲဖြစ်ဘူးဆိုရင်… ကွင်းလယ်လူတွေဖြည့်ကစားပေးဖို့ လိုပါတယ်… -ဖျက်ထုတ်မှုတွေ ကတော့ ဘောလုံး ပါသင့်ပါတယ်… -အေရိယာထဲ..အကွက်တွေ..စီစဉ်ထားရင်ကောင်းပါတယ်… -ကွန်ဒါ ကန်ပုံနှစ်မျိုးလောက်..ကန်သင့်တယ်…. -အသင်းငယ်တွေနဲ့ ဆိုရင်…ကွန်ဒါရလေ့ရှိလို့… -ခပ်ပြင်းပြင်း လမ်းကြောင်းပြောင်းတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ -အပေါ်ကျလာတဲ့ပုံစံ.. -နှစ်ပွဲပေါင်းပေါ့… -အသင်းကြီးနဲ့ကစားရင် ကောင်တာ ကောင်းသင့်တယ်.. -အားလုံးဆင်းရင် တစ်ယောက်လောက် ချန်ထားသင့်တယ်… -ခံစစ် တိုက်စစ်မျှမျှတတ… -တောင်ပံတိုက်စစ် ကောင်းပြီး ကွင်းလယ်တိုက်စစ် ပိုကောင်းသင့်တယ်… -ကစ် အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှုလိုတယ်… -မြေရှပ် ဘောတွေ.သုံးသင့်တယ်.. -မြေလှမ့်ဘောတွေ … Continue reading →
MYANMAR FOOTBALL -အခြေခံ passing လေးတွေ မ မှားဖို့…. နေရာယူကောင်းဖို့… -တစ်ယောက်ချင်း တွေ့ ရင်နိုင်ဖို့ ပဲ..စကေး -တွဲ လုံးလေးတွေမှန်ဖို့ -စကေး + တွဲလုံး – သိပ်မဝေးလွန်းပဲ..၁၈ကိုက်စည်းဘီးကုတ်…ကစ်တွေ ပြင်းဖို့..ဂိုးပေါက်တည့် ဖို့ -ဖေါက်ရရင်တော့…ရှေ့တိုးရမှာပေါ့…. -အခြေခံ..လိုအပ်..လေးတွေနဲ့…. -အဆင့်မြင့်ကတော့..နည်းပြအတိုင်းပေါ့…..
************************************ New movie ….. 2009…second half year story….S– Even the Rain …. -Even ….1500 -The Rain …..close friendship ….သံယောဇဉ်… -Blue….finish … မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ပုံက tv-serie ထဲမှာပါတယ်… ************************************* -၂၀၀၈ မှာ ကိုယ် တော့ပြည်တွင်း သိပ်မဟုတ်လှဘူးဆိုပြီး internet သုံး တယ်….. -s– website က webpage မတင်တော့ …update..တင်ဖို့ … Continue reading →
************************************* ** Man -u Vs Bolton ** Sunderland Vs Liverpool ************************************* Champiom league တချို့ဟာမှန်တတ်ပေ မယ့် နှစ်တိုင်းပွဲစဉ်ခန့်မှန်း လွဲတတ်တယ်….. I want …to meet … Chelsea Vs Schalke …Bundesliga Man u Vs Real …Laliga Bercelona Vs Chelsea ….premier Spur Vs Inter …..Serie..A … Continue reading →